Amathiphu Awusizo Okuvela Ku-Semalt On Indlela Yokuvimbela Ama-imeyili Angadingeki Ku-Akhawunti Yakho ye-Gmail
Ukuthola ama-imeyili angafuneki newokuthukuthela kusuka ku-akhawunti yakho ye-Gmail kungabangela ukucasula. I-Gmail iye yafaka phambili ukuhlunga okuphumelelayo ukuvimbela ama-imeyili ogaxekile avela ohlwini lwamakheli ezinonya nabathumeli abathile. Uma ngabe uthola ama-imeyli ogaxekile, i-Gmail yenza kube lula kuwe ukuvimba ama-imeyili angenalutho ngokugcwele.
U-Ross Barber, u-10 (Semalt ochwepheshe, uthi eminyakeni eyedlule, abagaxekile nabahlaseli basebenzisa ama-imeyili abhaliwe ukweba ulwazi kusuka kumakhompiyutha omsebenzisi wokuphela. Uma uchofoza i-imeyili enobungozi ku-akhawunti yakho ye-Gmail, ungathunyelwa kuwebhusayithi enonya lapho abaduni bangathola khona ulwazi lwakho lwezezimali namaphasiwedi ngokushesha. Ngokuhamba kwesikhathi, abakwa-spammers benza imali yangempela ekhokhelwe yizinhlangano njengemali yokukhangisa. Ama-imeyili angafuneki akudingeki abe yinkinga eyinhloko ethinta umkhankaso wakho we-intanethi noma ukusebenza. Vumela ama-imeyili angamanga abe nje ukucasula okuncane ngokunciphisa inani lama-imeyili angafuneki athunyelwe ku-akhawunti yakho.
Ungavimbela kanjani abasebenzisi ku-akhawunti yakho ye-Gmail usebenzisa izihlungi zogaxekile
Uma kuziwa ekuvimbeleni ama-imeyili ogaxekile kusuka ku-akhawunti yakho ye-Gmail, ukusebenzisa izihlungi zogaxekile kufanele kube yindlela yokuqala yokucabangela. Izihlungi zogaxekile zikhomba lapho iningi lama-imeyili akho angafuneki avela khona, izakhi zobuchwepheshe zama-imeyili angamanga, indawo ehlanganiswe i-imeyili, kanye nenani eliphelele labantu abathola ama-imeyili angacelwe.
Ukuze uvimbele ama-imeyili acasulayo futhi angamanga avela kubathumeli abathile bokungena ku-akhawunti yakho ye-Gmail, faka nje abathumeli ohlwini lwakho lwe-Gmail. Emva kokuthola i-imeyili engadingeki, hlola bese uchofoza umcibisholo ophansi 'kuboniswe ekhoneni eliphezulu ngakwesokudla le-imeyli ekhohlisayo.
Khetha ngokusebenzisa izinketho ezibonisiwe ngemuva kokuchofoza umcibisholo ophansi, bese uchofoze inketho ethi 'Vimbela Sender'. Esikhathini esizayo, wonke ama-imeyili angafuneki avela kumthumeli ovimbekile adluliselwa ngokuzenzakalelayo kufolda 'engenasidingo'. Ngenhlanhla, i-Gmail ikunika ithuba lokuvulela abathumeli abavalelwe ngengozi.
Amasu wokubika ama-imeyili ogaxekile
Uma uthola i-imeyili yogaxekile ku-akhawunti yakho ye-Gmail, akudingeki ukwesabeke. Ukuchofoza uphawu lokuhlola olutholakala ohlwini lwe-imeyili noma ukusebenzisa izihlungi linikeza isisombululo esihle kakhulu. I-Google isebenzisa imibiko efakwe ngabasebenzisi bokugcina ukuhlunga isihlungi sogaxekile futhi senze kube ngcono. Izihlungi zogaxekile ziletha imiphumela emihle kakhulu. Kodwa-ke, amanye ama-mail angenalutho njalo athola indlela yokufinyelela ku-akhawunti yakho ye-Gmail. Ukuze ubike ama-imeyili angenamsebenzi atholakele ku-akhawunti yakho, chofoza 'umcibisholo ophansi' oboniswe phezulu ngakwesokudla kwe-imeyili engafanele.
Pheqa phansi ohlwini lwezinketho eziqukethwe ngaphansi komcibisholo ophansi bese uchofoze okuthi "Bika ugaxekile". Ngemuva kokumaka noma ukubika imiyalezo nama-imeyili, okuqukethwe okungenamsoco kuthunyelwa 'kufolda engenasidingo.' Hlala uvimbela futhi ubike ama-imeyili angafuneki ku-Gmail futhi unciphise inani lamafayela angenayo ama-spymers nabahlaseli.
I-Gmail ithatha ukuphepha kwe-akhawunti yakho ye-Gmail ngokujulile. Ungavumeli ibhokisi lakho lokungenayo lilayishwe ngokweqile ngamafayela angenamsoco nama-imeyili angafuneki. Gwema ukuthola ama-imeyili angenangqondo kusuka kubathumeli abathile ngokuwafaka ohlwini lwakho lokuvimba. Ukuvimbela abathumeli abathintekayo ohlwini lwakho lokuvimbela ngengozi kungenziwa ngokuchofoza 'umcibisholo ophansi' bese uchofoza inketho 'yokuvula'.